वि’द्रोहीलाई धपाउँदै अघि बढेका अनिल त्यसपछि त्यहीँ ढले ! - Mitho Khabar
April 6, 2022 mithokhabarLeaveaComment on वि’द्रोहीलाई धपाउँदै अघि बढेका अनिल त्यसपछि त्यहीँ ढले !
संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ अफ्रिकी मुलुक कंगोमा खटिएका एक नेपाली शान्ति सैनिकको मृ’त्यु भएको छ । नेपालका ‘श्री नेप क्यूआरएफ कम्पनी’ पहिलो डफ्फामा कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकको अपरेसन ‘बाली’को दौरानमा मंगलबार प्रमुख सेनानी निकिल कुँवरको कमान्डमा कर्डन एन्ड सर्चको कारबाही सञ्चालन गर्दा घा’इते भएका सुर्खेतका अनिल गुरुङको मृ’त्यु भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले जनाएका छन् ।
मृत्यु हुने नेपाली शान्ति सैनिकमा सुर्खेतको गुर्माकोट–१४ निवासी सिपाही अनिल गुरुङ रहेका छन् । उनको उपचारको क्रममा मंगलबार मृत्यु भएको नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको हाे ।
अपरेसन ‘बाली’को दौरान मंगलबार विद्रोहीले अज्ञात स्थानबाट अचानक चलाएको गो’ली ला’गी गुरुङ घाइते भएका थिए । घाइते नेपाली शान्ति सैनिकलाई हेलिकप्टरमार्फत उपचारको लागि बुनियाँस्थित लेबल–२ अस्पतालमा लगिएको थियो । उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
पहिला वि’द्रोहीको क’ब्जामा रहेको जमिनबाट उनीहरूलाई धपाएर नेपाली सेना त्याे ठाउँमा पुगेकाे थियाे । त्यही बेला बि’द्राेहीले परैबाट हानेकाे गाे’ली ला’गेर गुरुङ ढ’ले । ‘अपरेसन बाली’ नामकाे सो कार्बाहीका बाँकी सबै सदस्य सैनिक सुरक्षित रहेको सिलवालले बताए । पाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा अफ्रिकी राष्ट्र कंगोमा खटिएका एक जना नेपाली सेनाको मृत्यु भएको पुष्टी गरेको छ ।
‘शान्ति स्थापना जस्तो महान एवं पवित्र कार्यमा संलग्न नेपाली शान्ति सैनिकको आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्युवरण भएकोमा निज शान्ति सैनिकप्रति प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले समस्त नेपाली सेना परिवारको तर्फबाट उहाँको बलिदानीपूर्ण योगदान प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्नु भएको छ,’ सेनाले विज्ञप्तिमा भनेको छ । सिंगो नेपाली सेनालाई नै स्तब्ध बनाएको यस दुःखद् घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति नेपाली सेनाले समवेदना प्रकट गरेको छ ।